Hisorohana Ny Fahapoizinana Amin’ny Merkiora, Firenena 92 Nanasoania Ny Fifanarahana “Minamata” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Novambra 2013 11:11 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Italiano, Português, বাংলা, Esperanto , Français, русский, polski, English
50 taona mahery taty aorian'ireo mponina tao Minamata, nararin'ny valan'aretina vokatry ny fahapoizinana avy amin'ny merkiora tamin'ny alàlan'ny sakafo an-dranomasina taon-toerana nalotoan'ny rano feno pozina tafahoatra, firenena 92 no nanao sonia ny fifanarahan'ny Firenena Mikambana natao hisorohana ny tsy hitrangan'ny loza mahatsiravina toy izany indray.
Ny Fifanarahana “Minamata” momba ny Merkiora, fitaovana iray iraisam-pirenena mamepetra mikasika ny merkiora dia nolaniana tao Minamata, Japana, nandritra ny fivorana natao ny 7 ka hatramin'ny 11 Oktobra 2013 teo.
Nomena ny anaran'ny Tanànan'i Minamata io fifanarahana io, toerana izay nangirifirin'ny fahapoizinana avy amin'ny merkiora hatramin'ny 1950 ny mponina tao aminy. Manazava ny momba ny tantaran'ireo tratry ny aretin'i Minamata ao anatin'ny dika natao ho an'ny aterineton'ilay gazety “Environmental Health Perspectives” i Rebecca Kessler, mpanao gazety momba ny siansa sy ny tontolo iainana :
Izay zazavavy izay, Shinobu Sakamoto ankehitriny no mpitarika ny Vondron'ireo Tratry ny Aretin'i Minamata. Ivelan'ny fivoriambe diplomatika ho an'ny Fifanarahana “Minamata”, dia nivondrona sy nifanakalo hevitra ihany koa ireo ONG maneran-tany sy ireo vondron'olo-tsotra ary nifampizara vaovao. Ny “International POPs Elimination Network” (IPEN) dia niara-nikarakara fihaonana an-tampony iray tamin'ireo Olon-tsotra Miady amin'ny Fandotoana ara-Tsimika (CACP) ny 8 Oktobra 2013 ary nanolotra ny Fanambaran'i Minamata momba ireo Metaly Manapoizina niaraka tamin'ny Shinobu.
Joe DiGangi mpanolotsaina ara-tekinika sy siantifika ao amin'ny IPEN dia nanambara: